အကြံပေးကြပါ — MYSTERY ZILLION
linux ကို အခုမှစသုံးမယ့် သူအတွက် ဘယ်ဟာကကောင်းလဲ သိချင်လို့ပါ
MZ က ညီအကိုများ ပြောပြပေးကြပါ
Linux ကို စသုံးမယ့် သူတွေအနေနဲ့ Ubuntu က အသင့်တော်ဆုံးပါ။ Linux သုံးမယ်ဆိုရင် Internet ရှိရင် သုံးရတာ သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်သလောက် အင်တာနက်မရှိတဲ့ စက်မှာဆိုရင် စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ ပြောရလောက်အောင်ပဲ။ Linux သုံးမယ် အင်တာနက်လည်း ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ Ubuntu ကို သုံးကြည့်ပါ။ Ubuntu က dialup တော့ သုံးမရပါ။
ပာုတ်ပ linux သုံးတဲ့အခါ အင်တာနက်မရှိရင် linux ရွေးမိတာမှားလေခြင်းလို့တောင် နောင်တရနိုင်တယ်ခင်ဗျ။ အင်တာနက်ရှိရင်တော့ တော်တော်လန်းတဲ့ OS တစ်ခုပါ။ Ubuntu ပြီးရင် ကျွန်တော် ကြိုက်တာကတော့ Kubuntu ပါ။ သူက Ubuntu နဲ့ အမျိုးတော်တယ်လို့လဲ ဖတ်ခဲ့ရဖူးတယ်။ မျိုးရိုးဗိဇက အများကြီးတူတယ်ပေါ့။
လင်းနစ်ကိုစသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ubuntu ကအကောင်းဆုံးပါ....လက်ရှိသုံးနေတယ်....ဒီပိုစ်ကိုလည်း...ubuntu နှင် ့
တင်လိုက်တာပါ....အထက်ကနှစ်ရောက်ပြောသလိုပဲ....အင်တာနက်မရှိလို ့ကတော ့သုံးရတာမမိုက်ဘူး
စသုံးတုန်းကတော့တော်တော်လေးကိုရွာပါတ်တာပါ...သုံးနေတဲ ့အင်တာနက်က....မိုဘိုင်းဘရော ့ဘန် ....သူက လင်းနစ်
နှင် ့အဆင်မပြေဘူး...ဝင်းဒိုးနှင် ့ဆိုရင်...အိုကေတယ်လေ...ဒါနှင့်ဝင်းဒိုးဘက်ပဲ လှည် ့သုံးနေတာ.....တစ်နေ ့တော ့...
ubuntu ကိုဒီမိုဘိုင်းဘရော ့ဘန် နှင် ့သုံးချင်တာနှင် ့....ဆရာကြီး google ကိုအကူညီတောင်းတော ့...သူပြောတဲ ့အတိုင်း
လုပ်လိုက်တာခုတော ့...အဆင်ကိုပြေလို ့...ဝင်းဒိုးဘက်ကိုတောင်...မရောက်ဖြစ်တော ့ဘူး....လင်းနစ်မသုံးဖူးသေးဘူးဆို
ရင်တော ့....သုံကြည် ့လိုက်ပါ.....သုံးရင်တော့ubuntu ကိုသုံးပါ.....တော်တော်လန်းပါတယ်...:cool: နောက်တစ်ခုကတော ့
အခက်ခဲရှိရင်တော ့....google မှာ ubuntu4mm ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါ....ပြီးရင်အဲဒီထဲကိုသွားပြီးတော ့...မသိတာတွေအကုန်
jinfuwang wrote: »
Ubuntu သုံးရင် Internet ရှိရင်ပိုကောင်းတာမှန်ပေမယ့် .... Internet မရတဲ့သူတွေအတွက်လည်း Offline Update ဆိုပြီးရှိပါတယ်.. ရန်ကုန်မှာဆို ကိုရဲ့က Ubuntu ပွဲတွေလုပ်ရင် Offline Update Files တွေပေးလေ့ရှိပါတယ်... Over 1GB တွေပါ။ နောက်ပီး ကိုရဲရဲ့ LRC shop တွေမှာ Ubuntu ISO files တွေအပါအ၀င် Offline Updates တွေပါ သွားယူလို့ရပါတယ်. အသေးစိတ်ကိုအောက်မှာ၀င်ဖတ်ကြည့်ပေ့ါ.. ခွိ
Pls let me know your modem made/model. I am facing the same problem.
You need to change IP Addresss in Network Proxy and Change Settings in Network Settings.
If you can't use internet at home, try Slax Linux.
Its modular design makes it possible to install softwares offline.
Warning: If you are new to Linux, Never Ever Try Gentoo Linux. You will never turn to Linux again.
သုံးနေတာက....meteor mobile broadband ပါ...တူနေလားမသိဘူး....တူနေရင်တော ့ကူညီလို ့ရပါတယ်:6:
ကျွန်တော့်မှာက internet connection မရှိဘူးဗျ
စာတွေထဲမှာ အရမ်းညွှန်းထားလို့ သုံးကြည့်ချင်တာ
ဒါဆိုရင်တော့ မသုံးတော့ပါဘူးဗျာ :eek:
blueice085 wrote: »
အင်တာနက်မရှိရင်လည်းသုံးကြည် ့ပါ......သုံးဖူးမှ...အခက်ခဲတွေ တွေ ့မယ်....အဲဒါကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရင်းနှင် ့....နောက်တော ့သုံးတတ်လာမှာပေါ ့....ဟုတ်ဘူးလား.....ပြီးတော့ကိုtk ပိုစ် ့ကိုသေချာဖတ်ကြည် ့ပါအုံး
အပ်ဒိပ် ကို offline ရတယ်...အဲဒါအတွက်.....ကူညီပေးမယ် ့လူရှိတယ်....ဒါဆိုရင်ဘာလိုသေးလဲ......ချသာချ........ဆက်ချဗျို ့:41:
Internet ရှိမရှိဆိုတာ .. မဆိုင်ပါဘူးဗျာ.
မရှိလို့မသုံးဘူးဆိုလို့မရှိပါဘူးဗျာ.. Ubuntu မှာ Offline Update သာလုပ်လိုက်... ခွိ .... ရေရေလည်လည်လန်းတွားမယ်.. Offline Update လုပ်ရတာလဲ လွယ်လွယ်လေး ... စမ်းသုံးကြည့်
Windows ထက်ကြိုက်တွားမယ်... အနော်တောင် Windows က တစ်ချို့ Software တွေ Ubuntu မှာ အဆင်မပြေတေးရို့ .. Windows နဲ့တွဲတုံးနေတာ.. ဟဲဟဲ
about Ubuntu Offline Update